Gabadh ka badbaadisay in nin ree Afgaanistaan ah la Masaafuriyo – AwKutub News
Gabadh ka badbaadisay in nin ree Afgaanistaan ah la Masaafuriyo
By awkutubnews July 28, 2018
Waxay sheegtay in Afgaanistan uu yahay waddan ay dhici karto in “ninkaas lagu dili doono”, waxayna intaa sii raacisay “waxaan samaynayaa wax walba oo karaankayga ah oo aan qofkaas noloshiisa ku badbaadin karo”.
“Ilaa iyo inta uu qof taagan yahay duuliyuhu dayaaradda ma duulin karo. Waxa kaliya ee aan samayn karo waa in aan joojiyo dib u celinta, ka dibna waxaan u hogaansamayaa shuruucda” ayey tiri.
Kiisaska magangelyo doonka waxaa go’aan ka gaara hay’adda socdaalka Sweden , Hadday go’aan ku gaaraan in qof dib loo celiyo, waxay qofka ku wareejiyaan booliska xuduudaha.
Warar ay warbaahintu qortay ayaa lagu sheegay in ay u badan tahay in ninkaas goor dambe la dhoofin doono, gabadhana ay wajihi doonto cawaaqib xagga sharciga ah oo la xiriira ficilladeeda.
Doomaha dadka sida ee ka tallaaba badda Mediterraneanka ayaa wajahaya diidmo isa soo taraysa, waxaana ku adkaanaysa inay helaan deked ay ku xirtaan.
Horraantii bishan, wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaa waxaa qabsaday cadaadis ku khasbay inuu ku sigto inuu is casilo, ka dib markii uu ku kaftamay in 69 qof ee reer Afghanistan ah dib loo celiyey sannadguuradiisii 69aad
Previous Entry Mareykanka oo Walaac ka Muujiyay dagaalada u dhexeeya Soomaalida iyo Oramada
Next Entry Madaxweyne Farmaajo oo Tagey Dalka Ereteriya